Beesha Abokor Axmed oo cududoodii isugu gaysay Kulmiye
Tuesday November 07, 2017 - 09:10:31 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Beesha Abokor Axmed oo cududoodii isugu gaysay Kulmiye ASC waxa maalmahan ka socda Somaliland olalihii doorashada madaxwaynaha Somaliland iyada oo cidwalba waa xusbiyadee ay jiidanayso wixii dad iyo taageerayaal ay jiidan karaan. yada oo loo adeegsanayo xeelad walba oo la isleeyahay waad ku soo jiidan kartaan dadka, ama balanqaad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto.
Sida aynu ognahay beelaha Somaliland ama deegaanada qaar waxa lagu tiranayay xisbiyo gaara sida beesha bariga Burco oo loo tiranayay xisbiga Kulmiye.
haddaba waxa dhacday in deegaamo badan oo laga filayay Kulmiye ay u diga rogteen xisbiga Waddani halka beesha Abokor Axmed ee Habar Jeclo ku adkaysatay xisbiga Kulmiye oo taageera hiil iyo hooba la barbar istaagtay xisbiga Kulmiye yaga oo ku doortay inuu yahay xisbi ku suntan halgankii Waddanka lagu xoreeyay oo ay isaga dambeeyeen Mujaahid Axmed Siilaanyo iyo Mujaahid Muuse Biixi Cabdi.
Beesha Abokor Axmed waxay ku adkaysteen Kulmiye oo shir balaadhan ku qabsadeen deegadnka Qoryaale oo dabeetana si cad u muujiyeen inay Kulmiye yihiin.
waxa xusid mudan in beeshu dawladii Axmed Siilaanyo ayna wax xila ka qaban taas oo dulmi ku ahayd beesha oo runtii ah beelaha ugu codka badan Gobalka Togdheer iyo waliba qayb libaax ka qaadatay halgankii Somaliland lagu xoreeyay oo rag farabadan ku waayay.
ugu dambayn waxa aynu sugna wa doorashada oo dhacda iyo guusha oo Kulmiye raacda inshaaAllah.